के हो त वास्तवमै फेसबुकको दानापानी ? - Everest Dainik - News from Nepal
के हो त वास्तवमै फेसबुकको दानापानी ?
नखाउ भने दिनभरिको सिकार खाउ भने कान्छा बाबुको अनुहार भनेजस्तो नचलाए नि सुख छैन चलाएपनि काम छैन भनेको जस्तो भैसक्यो फेसबुक । कहिलेकाहीँ आफु जति बिरामी भएपनि फेसबुक नखोली चित्तै बुझ्दैन । अझ हामीमध्ये कतिपयले त बिरामी हुनुभन्दा अगाडि नै बिरामी भएको खबर सार्वजनिक पनि गर्ने गर्छौं र पछाडि बिरामी हुन्छौं । करोडौँको संख्यामा प्रयोगकर्ताहरु रहेको फेसबुकका थुप्रै फाइदा छन् ।
मेरो फेसबुक भोकायो लौन दाना हाल्देउ फेसबुकको बारेमा टिप्पणी गर्नु भन्दा पहिले यसको थोरै जानकारी गराउन उचित ठाने। फेसबुकको आविष्कार मार्क जुकर्वर्गले फेब्रुअरी ४ ,२००४ मा गरेका थिए ।
जसमा फेसबुक लाइ नेपालीमा रुपान्तरण गर्दा अनुहार पुस्तिका भन्ने हुन्छ । आज प्रायः जसो प्रत्येक नेपाली युवाको हात हातमा यो मुहार पुस्तिका छ । झनै यसले मानिसलाई धेरै फराकिलो गहिरो बनाइ दिएको छ कि यसको नसा लागेपछि मान्छेले भात खानै छाड्छ ।
अब कसरी भन्नुहुन्छ भने तल पढ्दै जानुहोस मेरो आफनै जीवन भोगार्इ अनुभव र फेसबुकमा भेटिएका साथीहरुको बारेमा केलाएकी छु । सदाझैं मलार्इ त्यो दिन फेसबुक चलाउन नपाउँदा कता कता के छुटेको के छुटेको जस्तो आभाष भइरहेको थियो।
कारण त्यो दिन बत्तिपनि थिएन वाइफाइ चल्ने कुरै भएन मोबाइलमा ब्यालेन्स पनि सकिएको थियो अलि बिरामी पनि भएकोले पसलसम्म जान मन पनि लागेन मलाई ।
लाग्यो त्यतिबेला साँच्चै मेरो फेसबुक भोकाएको छ । सायद फेसबुक नपाएर म भोकाएको थिए या फेसबुक मेरो अनुपस्थितिमा भोकाएको थियो, त्यो भने कि उसलाई कि मलाई थाहा होला । मेरा मनमा एका एक कुरा खेल्न थाले । मलाई लाग्दैछ यति बेला मेरो फेसबुक साँच्चै भोकाएको छ ।
सुन्दा तपाइलाई लाग्न सक्ला के फेसबुकले पनि मान्छेको जस्तै चिया, नास्ता, खाना, खाजा गर्छ कि फेसबुकलाई पनि गाई बस्तुको जस्तो घाँसपात दानापानी हाल्नुपर्छ किनकी फेसबुक त निर्जीव हो । त्यसलाई चलाउने, खेलाउने, जिस्काउने, माया गर्ने हामी सजीव हौं ।
मलाई मात्र हैन यो कुरा तपाइलाई पनि थाहा छ । फेसबुक आफैं बोल्न सक्दैन, लेख्न सक्दैन, हिँड्न सक्दैन । विचराको न त हात छ न खुट्टा छ । न त चपाउने दाँत छ न त बोल्नलाई मुख छ । न त सुँघ्नलाई नाक छ न सुन्नलाई कान नै छ । बिचराको केही छैन तर पनि ऊ हामी भन्दा निकै माथि छ । हाम्रो असल मित्र बनेको छ । हाम्रो हरेक गतिबिधिमा उसको सहभागिता अनिवार्य छ । हामी सजिव प्राणी भएकै कारण हाम्रो आफ्नो जीवन एक्लै व्यतित गर्न सक्दैनौ ।
त्यतिकैमा दिदी पनि अफिसबाट आइपुग्नुभयो अनि बिरामी मान्छे नसुतेर किन टोलाएर बसेको भन्नुभयो म दिदीको प्रश्नले लाचार भए । कारण मसँग कुनै जवाफ थिएन । फेरि म आनाकानी गर्दै दिदीलाई केही भन्न खोजेथे ।
दिदीले बुझेर सोध्नुभयो,के भयो के भन्न खोज्दै छौं र मैले फ्याट्टै भने दिदी मेरो फेसबुक भोकायो लौन दानापानी हाल्नुपर्यो मेरो कुराले दिदी अकमक्क पर्नुभयो । यो के भनेको भन्दा मैले भने- ‘हो, दिदी हामीलाई जसरी बिहान उठ्ने बितिकै चियानास्ता चाहिन्छ, भोक लागेको बेलामा खानेकुरा चाहिन्छ त्यस्तै माछा, मासु, सागसब्जी इत्यादि खानेकुराको समिश्रणबाटै हाम्रो शरीर स्वस्थ र तन्दुरुस्थ बन्दछ त्यसरी नै फेसबुकलाई पनि जिवन्तता दिन विविध कुराहरुको आवश्यकता पर्दछ ।
आज ३ दिन भो म बिरामी भएदेखिको फेसबुकमा कुनै स्टाटस राख्न पाएको छैन । मेरा मनका अनेकौ विचारहरु फुरेका छन, त्यसै ओइलाउनु भन्दा उसको पेट भर्नु जाति हो । कुनै पनि मित्रहरुको स्टाटसमा कमेन्ट ठोक्न पाएको छैन । बरु म म्यासेज कसैलाई गर्दिनँ ।
तर, मेरा मनमा जागेका केही विचारको स्वादहरु मेरो आत्मीय मित्रहरुमाझ पस्कन चाहान्छु अनि त दिदीले रिचार्ज नै ल्याएर हाल्दिनुभयो । अनि म खुसी भएँ र भोकाएको फेसबुकको पेट भर्न तर्फ लागे । फेसबुकप्रति हामी यति आकर्षित भएका छौँ कि हामी फेसबुकबिना आफ्नो जीवन नै अधुरो रहेको मान्न थाल्छौं ।
कैयौँ लुटिन्छन यहाँ, केही छुटिन्छन् यहाँ । गलेका, टुटेका, छुटेका भेटिन्छन् यहाँ । बुझक्की जस्तै बन्यो भने, लागेका दाग मेटिन्छ्न यहाँ । कोही तिर्खाएको हुन्छ कोही भोकाएको, अनेकथरि थकान मेटिन्छ यहाँ । कोही रुनेहरु कोही हाँस्नेहरु, अनेकथरि देखिन्छन यहाँ, कोही माफ माग्ने, कोही माफ दिने, मनभित्रका अन्तर दोष भावहरु मेटिन्छन् यहाँ, कोही बाठो, बुझ्ने हुन्छन्, सूचना, विचार, धारणाहरू पोखिन्छ यहाँ ।
हुन त वभिन्न भौगोलिक अवस्थामा रहेको एउटा बन्द कोठा जस्तो परिधिमा रहेका मानिसहरुलाई खुल्ला र फराकिलो स्वतन्त्र चिन्तन विवेकका साथ आ-आफ्नै मातृभाषामा संचारको स्थापना गराउने काम गरेको छ, फेसबुकले । यसले संञ्चारको साधनमध्ये सबैभन्दा चाँडो सूचना दिने काम गरेको पाइन्छ ।
एक-अर्काबीच सूचना, विचार, धारणाहरू, जानकारीहरू साटासाट गर्ने प्रक्रिया वा साझेदारी कायम गर्ने प्रक्रिया हो फेसबुक । फेसबुकमा लिखित, मौखिक, श्रब्यदृश्य वा साङ्केतिक अर्थहहरु रहेका हुन्छन । जस्को माम्यमबाट हामीले संचार गर्ने गरेका छौं ।
हामीले फेसबुक मार्फत सुनेर, लेखेर, देखेर, सहभागिता जनाउने गरेका छौं । हरेक विषयवस्तुलाई सन्देश वा जानकारीको रूपमा प्रकाशन वा प्रसारण गर्ने प्रक्रियालाई आमसंचार भन्दै आएको बेलामा फेसबुकले भने सामाजिक संजालको रुपमा आफनो संजाल संसारभर फैलाउन सफल भएको छ ।
यिनै विभिन्न यन्त्रहरुका माध्यम बाट थुप्रै सामाजिक संजालहरु आउन थालेका छन् र प्रयोग भइ रहेका छन् । जसरी व्यक्ति व्यक्ति मिलेर समाजको संरचना निमार्ण भएको छ । जसमा अनेकौं थरिका मानिसहरु छन उनीहरुको आ आफनै जीवनशैली, भोगाइ र मनका भावहरु छन् त्यसरी नै पत्येक व्यक्तिको फेसबुकबाट समाजको पत्येक अंगमा ढाकेको भन्दा फरक नपर्ला ।
यस पृथ्वीको सृष्टि कालदेखि नै जैविक अजैविक वा भौतिक बस्तुहरुमा सकारात्मक र नकारात्मक चिज बोकेर आएको देखिन्छ । त्यसैले हाम्रो गाउँघर समाजमा एउटा टुक्का प्रचलनमा आएको हुनु पर्छ “जान्नेलाई श्रीखण्ड नजान्नेलाई खुर्पाको बिँडू यहि वाक्यमा निर्भर हुँदै आएको देखिन्छ यो फेसबुकमा ।
कोही जिस्काउँछन् कोही थर्काउछन्, अनेक तरिकाको बात हुन्छ यहाँ । साँच्चै पत्तो नपाएरै होला, चलाउँदा चलाउँदै रात हुन्छ यहाँ ती पिउने भट्टीहरु भुलेका छन् कोही पढ्दै लेख्दै फुर्दै स्टाटसमा खुलेका छन् कोही सिकारी बनि प्रत्येकका मन मस्तिष्कमा डुलेका छन् ।
यसैगरी चलेका छन् नेपाली बजारमा फेसबुक यहाँ राजनीतिज्ञदेखि ब्यापारीसम्म, कलादेखि साहित्यसम्म साधारण सरल सोंचदेखि जीवनयापनसम्म दलालदेखि भ्रष्टाचारीसम्म सज्जनदेखि अपराधीसम्म यो फेसबुकको फाइदा र बेफाइदा गहिरिएर हेर्दा कति अनन्त छ ।
नोट : लेखिका पौडेलले दानापानी भनेर फेसबुकमा हामीले राख्ने स्टाटस, फोटो ,कमेन्ट, लाइक तथा कुराकानी जस्ता बिषयबस्तुलाई भन्न खोजेकी हुन् ।
ट्याग्स: facebook lover, samjhana poudel